Enterprise Social Media Marketing Platform Atụmatụ. Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu nzukọ, enwere usoro isii dị mkpa nke ngwanrọ azụmaahịa ịchọrọ mgbe niile:
Nchịkọta Akaụntụ - ikekwe ihe kachasị rịọrọ maka usoro ọrụ ọ bụla bụ ikike ịmebe usoro nlekọta akaụntụ n'ime ihe ngwọta ahụ. Yabụ, ụlọ ọrụ nne na nna nwere ike ibipụta n'aha akara ma ọ bụ aha dị n'okpuru ha, nweta data ha, nyere aka n'ịgbasa na ijikwa ọtụtụ akaụntụ, yana ijikwa ohere.
Usoro nkwado - ụlọ ọrụ na-ahụkarị ụlọ ọrụ nwere ihu ọma iji kwado usoro iwu, usoro iwu, yana usoro imekọ ihe ọnụ. Nchịkọta mgbasa ozi mmekọrịta, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịkwaga site na ndị otu gaa na onye na-ese ihe osise, na njikwa, na iwu, laghachi na onye editọ, gaa na onye mbipụta akwụkwọ. Me ihe ndị a site na email ma ọ bụ gbasaa na-aga na njikwa
Nkwenye, nchekwa, ndekọ, na nkwado ndabere - Na ụlọ ọrụ na-achịkwa nke ọma ma ọ bụ nke ọha na eze, nchekwa dị mkpa nke ukwuu ka a na-achọkarị nyiwe iji nweta usoro nyocha nke ndị ọzọ, ma nwee ebe nchekwa dị n'ime na nkwado ndabere na arụmọrụ n'ime sistemụ ahụ.
Nanị Banye Nanị (SSO) - Ndị ọrụ chọrọ ka njikwa nke ngwa ha abanye na ya wee banye abanye na ikpo okwu a na-ejikwa ya site na ngalaba IT ma ọ bụ nhazi ụlọ ọrụ ha.
Njikwa nnweta - Ọrụ na ikikere dị oke mkpa maka ngwanrọ nke ụlọ ọrụ iji hụ na mmadụ enweghị ike ịgafe usoro akwadoro ma ọ bụ rụọ omume ndị enyereghị ha.
Nkwekọrịta Ọrụ Ọkwa (SLA) - N’ebe zuru ụwa ọnụ, oge dị oke mkpa nke mere ekwenyesiri ike ka SLA banye nkwekọrịta yana usoro ọrụ ọ bụla. Ọzọkwa, a gosipụtara mmezi na downtime n'ihu ọha iji hụ na ha anaghị egbochi ọrụ.
Nkwado Ọtụtụ Asụsụ - Anyi bi na onodu aku na uba uwa, ya mere inwe ike ikwado otutu asusu di n'ime atumatu onye na-ekwu okwu dika ikpo okwu na ibiputa otutu asusu di oke nkpa. O di nwute, asụsụ aka nri-aka-ekpe na-abụkarị ihe a na-atụgharị uche dị ka nhazi nyiwe yana ọ na-esiri ike ịlaghachi ma degharịa nyocha ya.
Mpaghara Oge Otutu - Ọ nwere ike iju gị anya na otu ụlọ ọrụ ndị na-eto eto anaghị ewe oge oge mgbe ha na-ebipụta nkwukọrịta. Wezụga ịtọọ oge onye ọrụ ọ bụla n'ime ikpo okwu, ị nwere ike ịtọọ oge nkwukọrịta gị ezubere iche na mpaghara oge ebe ebum n'uche gị? Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ntọala mpaghara mpaghara oge niile kama itinye oge oge niile.
Mmekọrịta - Usoro Mmemme Ngwa (API) ma mepụta njikọta na sistemụ ndị ọzọ dị oke mkpa maka akpaaka, nnweta data, na ịkọ akụkọ ozugbo.
Insurance - Anyị bi na ụwa ịgba akwụkwọ, yabụ ihe achọrọ na ikpo okwu nwere mkpuchi zuru oke iji kpuchie ikpe ọ bụla bụkwa ihe dị mkpa n'ime nyiwe ngwanrọ nke ụlọ ọrụ. Eleghi anya agbachila ikpo okwu ahụ na ikpe na-esite n'aka ndị ahịa njedebe provider onye na-eweta gị nwere ike ịdaba iji kpuchie mmefu ahụ.
Nyiwe Social Media nyiwe
Ekwesiri ka etinye ihe ndị a dị n'elu na usoro mgbasa ozi gị ma ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Social Media nyiwe a nwere atụmatụ ndị a:
Nhazi usoro - Ikike ịmalite usoro sitere na otu ndị ọrụ n'ime sistemụ gaa na nke ọzọ dị mkpa. Onye ọrụ ọ bụla nwere ọrụ na ikikere nke ha na-egbochi ike ha. Ihe atụ:
A na-akpọ aha gị n'ịntanetị (yana ma ọ bụ na-enweghị mkpado). Enwere ike ịdọrọ arịrịọ a na ahịa ma ọ bụrụ na ọ bụ olile anya atụmanya? Iji ahịa nkwado ma ọ bụrụ na ọ bụ a ahịa nke? Marketingre ahịa ma ọ bụrụ na ọ bụ arịrịọ mgbasa ozi?
Have nwere usoro mkpọsa nke na-etinye mbipụta mmekọrịta mmadụ na oge akọwapụtara. Mgbasa ozi mgbasa ozi gị ọ na-ebute ma na-arụ ọrụ kwụ n'ahịrị na-esite na otu ọdịnaya gị, na ndịna-emeputa gị ma ọ bụ ndị otu vidiyo, na ndị ọrụ iwu ma ọ bụ ndị njikwa gị, site na nnabata na ịhazi usoro?
Usoro ihe omume na kalenda - N’ụlọọrụ na ngalaba kọmpụta, ị nwere ike ị nyocha ngwa ngwa ma lelee kalenda mgbasa ozi gị wee nye ọrụ?
Ntughari uche na ntughari uche - Na ụlọ ọrụ na nke okpuru ala, ị nwere ike itinye mkpọsa na-elekọta mmadụ maka ndị mmadụ, ngwaahịa na ụlọ ọrụ yana nyocha mmetụta? You nwere ike ịbido arịrịọ n'ime ozugbo iji mee ka ndị otu kwesịrị ekwesị zaghachi? Nwere ike ị na-akọ na mmetụta karịrị oge iji hụ na ị na-enwe ezi mmekọrịta gị na ndị ahịa gị?
Mmekọrịta - you nwere ike ịrụ ọrụ n'ime etiti ikpo okwu iji kpọtụrụ, ozi, ma bipụta site na ọwa mgbasa ozi ọhaneze na akaụntụ nke ị na-achịkwa na ụlọ ọrụ ma ọ bụ nke obere akaụntụ? Nwere ike ịdọrọ data azụ na nkwado ndị ahịa gị ma ọ bụ usoro mmekọrịta ndị ahịa gị ma ọ bụrụ na enwere arịrịọ? Nwere ike ịkwanye nyocha ahịa na sistemụ iji nyere aka chọpụta atụmanya ma jikọọ ntụpọ n'etiti mkpọsa na ịzụ ahịa ahịa?
Njikọ Njem - you nwere ike ịkwalite njem njem ndị ahịa omnichannel na ihe omume site na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe gị dị ka ihe na-enye aka?
Igwe ihe igwe - Itinye ojiji nke AI iji nweta nghọta miri emi na mkpokọta akara, mkparịta ụka na ntanetị, itinye aka na ozi akọwapụtara (isiokwu, eserese), na ọ nwere ike inweta, mbugharị, ma ọ bụ njigide.
Akuko na Dashboards - Maka ọrụ niile ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta akụkọ siri ike na ụlọ ọrụ na nke obere nke nwere ike ịdepụta ngwa ngwa, kewaa ya, wee jiri ya tụnyere ọrụ n'ofe mkpọsa, oge, ma ọ bụ oge ụfọdụ?
Njirimara ndị a bụ na mgbakwunye na ụdị mgbasa ozi mmekọrịta gị na-eme ka akpaaka, njikarịcha, usoro ihe omume, na ịkọkọta mgbalị gị na-elekọta mmadụ.
Ahịa Social Studio
Salesforce Social Studio na-enye atụmatụ niile dị mkpa maka Enterprise Social Media Management, gụnyere:
Nchịkwa - ijikwa ndị ọrụ na ịnweta n'ofe ngwaahịa Salesforce.
Kwusaanụ - ike ịtọọ oge ma bipụta n'ofe ọtụtụ akaụntụ na ọwa.
Soro - ikike imeghari na isonyere mkparịta ụka, wee hazie usoro ọrụ ya na ọrụ ma ọ bụ irere.
Nyochaa - nyochaa ma gee ntị na akaụntụ ndị nwe ma nweta nghọta gafee mgbasa ozi mmekọrịta na isi okwu na mmetụta.
Amamịghe echiche - Ahịa Salesforce Einstein nwere ike iji kọwaa onyonyo na akpaghị aka site na njirimara iji nweta nghọta miri emi banyere itinye aka.
Kedu ihe bụ ụlọ ọrụ kacha mma Social Media Platform?
Ọ bụghị ihe niile na-elekọta mmadụ media nyiwe na-kere ọ bụla mma ị na-ahụ depụtara n'elu. Ana m agba ndị ahịa m ume ị gafere usoro usoro mgbe itinye ego na teknụzụ ahịa nke ahụ anaghị agụnyekarị ewu ewu nke ikpo okwu, onyinye ya, ma ọ bụ nkwanye ugwu nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Malite na Ihe Mgbaru Ọsọ Gị - kedu ihe ị na-achọ inweta site na usoro mgbasa ozi mmekọrịta? Ghọta nke nsogbu, mmetụta ọ na-enwe n'ọgbakọ gị, na uru ọ ga-eweta. Nke ahụ nwere ike itinye ego na akpaaka akpaaka, mkpebi ka mma na data oge, ma ọ bụ mụbaa njigide ekele maka ahụmịhe ndị ahịa ka mma.
Kpebisie ike na akụ gị - Gini bu ihe ndi ozo (ndi mmadu, mmefu ego, na usoro iheomume) nke ikwesiri igafe na ikpo okwu ohuru. Omenala ị bụ onye e kuchiri ekulo? Have nwere otu ndị nwere ike ịta ahụhụ nke mmụta na ịkwaga sistemụ ọhụrụ?
Chọpụta Usoro Ugbu A - nyochaa ndị ime ime gị site na njikwa ruo na ndị ahịa gị na-eche ihu na usoro mgbasa ozi ị na-arụ ugbu a. Ghọta ebe obi nkoropụ dị yana ekele maka nyiwe na usoro dị ugbu a. Nke a ga - eme ka o doo anya na ị họrọ ihe ga - eme ka nzukọ gị mma karịa imejọ ha. Enwere ike ịme nke a ka ọ bụrụ ihe nyocha dị iche na ịtụle usoro mgbasa ozi mmekọrịta gị na-esote.
Nyochaa ndị na-ere gị - Tụlee akụ na usoro gị na onye ahịa ọ bụla ma hụ na ọ na-ezute ike niile dị ugbu a ịchọrọ. Enwere ike inwe usoro ụfọdụ chọrọ nhazi n'oge mmejuputa ma ọ bụ Mbugharị… mana gbalịa ịchọpụta otu ị ga-esi mezuo usoro ọ bụla n'ụzọ zuru ezu iji belata ihe ize ndụ nke nnabata.
Tụọ Ohere - Ọ bụrụ na ị na-etinye ego na ikpo okwu dị iche iche, ha ga-enwe atụmatụ ọhụrụ nke na-enye ohere iji melite nlọghachi na ntinye teknụzụ.
Vingkwaga mbọ mgbasa ozi mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ gị na ikpo okwu ọhụrụ nwere ike ịbụ ego na-akwụghachi ụgwọ na-arụ ọrụ na ahịa ahịa dijitalụ nke ụlọ ọrụ gị. Họrọ amamihe… ma egbula oge ịrụ ọrụ na a ọkachamara ma ọ bụ onye nyocha nke maara ụlọ ọrụ ahụ ma nwee ike inyere gị aka nyochaa ma họrọ onye na-ere gị ọzọ.
Tags: ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ mediaatụmatụ ọrụ mgbasa ozi mmekọrịtanyiwe usoro mgbasa ozi mmekọrịtaelekọta mmadụ crmelekọta mmadụ medianchịkọta mmadụ mgbasa ozielekọta mmadụ media archivingna-elekọta mmadụ media nnabataelekọta mmadụ mgbasa ozi crmnjikwa mmekọrịta ndị ahịa mmekọrịtaelekọta mmadụ media mobile ahịa n'elu ikpo okwunhazi usoro mgbasa ozinlekota oru mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa oziiwu mgbasa ozi mmekọrịtausoro mgbasa ozimmekọrịta mmadụ na ibe yausoro mgbasa ozi mmekọrịta
Mee 20, 2013 na 10: 59 AM
Hey Doug, nnukwu nyocha! Shoutlet bụ ikpo okwu dị ike nke ukwuu, nke ahụ bụ n'ezie! Enwere m olileanya na ị dị mma.